ဖက်ဒရယ်မြေ ဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ရေးဆွဲရန် ဒို့မေကွန်ရက် ချိတ်ဆက်၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၄?? - Yangon Media Group
ဖက်ဒရယ်မြေ ဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ရေးဆွဲရန် ဒို့မေကွန်ရက် ချိတ်ဆက်၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၄??
လက်ရှိတည်ရှိ နေသည့်လယ်ယာမြေဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်လွှတ်တော်တွင်တင်သွင်းထားသည့် ဥပဒေကြမ်းများအား ဖျက်သိမ်း၍ ဖက်ဒရယ်မြေဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ဦးစွာရေးဆွဲရန် ဒို့မြေကွန်ရက်ချိတ်ဆက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း ၄၉၃ ဖွဲ့မှ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတို့တွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ၁၄ ခုတို့တွင် ဒို့မြေကွန် ရက်ချိတ်ဆက်မြေယာအရေးလှုပ်ရှားသည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လူထုတွေ့ဆုံမေးမြန်း မှုများပြုလုပ်၍ ရရှိလာသည့်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံကာ မေ ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel တွင် ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်၍ ယင်းကဲ့သို့တောင်းဆို လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၂ မြေလွတ်မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် လွှတ် တော်တွင်တင်သွင်းထားသည့် ၎င်းကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း (၂ဝ၁၇)၊ ၂ဝ၁၂ လယ်ယာမြေ ဥပဒေနှင့်ယင်းဥပဒေကိုပြန်လည် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်း (၂ဝ၁၇) နှင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မြေသိမ်းဥပဒေ ကြမ်းများအား ဖျက်သိမ်း၍ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ဒေသခံဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ၏ မိရိုးဖလာမြေ ယာအခွင့်အရေးများကိုအပြည့်အဝဦးစားပေးပြီး မူရင်းဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ၏ မိရိုးဖလာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မိရိုး ဖလာမြေယာနယ်နိမိတ်သမိုင်း ကြောင်းအမှန်ဖော်ထုတ်ခြင်းကို အားပေးလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အသိအမှတ်ပြုပေးရန် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် ဖက်ဒရယ်မြေယာဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ဦးစွာရေးဆွဲရန် တောင်းဆိုကြောင်းကို ယင်းသတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် သဘောထား ကြေညာချက်ထုတ်တောင်းဆိုလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေသီးသန့်ရှိပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေသုံးခုလုံးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအချက်တွေ ထည့်သွင်းထားတယ်။ နောက်ပြီး တော့ မြေသိမ်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ သိမ်းတယ်ဆိုတာက ဘူဒိုဇာနဲ့ထိုး ပြီးသိမ်းတာလား၊ ဘယ်လိုသိမ်း တာလဲ။ အခုကခေတ်တွေပြောင်းလာပြီ။ ဥပဒေနဲ့အညီ၊ ဥပဒေနဲ့ သိမ်းဖို့ ရေးဆွဲတာဖြစ်တယ်။ လူဆင်းရဲကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ ဥပဒေဖြစ် တယ်”ဟု ဒို့မြေကွန်ရက်မှ ကိုစည်သူကပြောသည်။
၂ဝ၁၂ မြေလွတ်မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများ၏ မွေးရာပါမူလအခွင့်အရေးဖြစ်သည့် မြေယာသယံဇာတဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ၊ မြေ/ ရေ/အင်းအိုင်နှင့် သစ်တောများအား ဘုံပိုင်စနစ်နှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ စီမံခန့်ခွဲလုပ်ပိုင်ခွင့်စနစ်များကိုအသိအမှတ်မပြုဘဲ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသောမှတ်ပုံတင်စနစ်ကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့ ခွဲ ဝေပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းတို့ ကြောင့် တောင်ပေါ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် လယ်၊ ယာမြေလုပ်ကိုင်သူအများစုအား ”ကျူးကျော်နေထိုင်စိုက်ပျိုးသူများ” ”ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများ” အဖြစ်သတ်မှတ်မည့် အနိုင်အထက်ပြု ရက်စက်ခွင့်ပြုသည့် ဥပဒေဖြစ်နေ ပြီး ယင်းဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင် ဆင်သည့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဥပဒေမူကြမ်းတွင်လည်း မူဝါဒများကို ပိုမိုတင်းကျပ်ထားကြောင်း ၎င်းတို့၏ထုတ် ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် မြေယာနှင့်ပတ်သက်သည့် လက်ရှိလွှတ်တော်တွင်တင်သွားထားသည့် ဥပဒေကြမ်းတိုင်းတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားသည့်အချက်များပါဝင်နေ ကြောင်း ကိုစည်သူကပြောသည်။ တောင်းဆိုချက်များကို ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှိ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီများသို့ စာ ပေးပို့သွားမည့်အပြင် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒို့မြေကွန်ရက်ချိတ်ဆက်အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းထင်စိုးက ပြောသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင် ငံ လာဟိုးမြို့တွင် ရထားချင်းတိုက်၊ လမ်းချော်မှုဖြစ်
ဆန်းချက်ဇ်မှာ အသင်း၏အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေဆဲဟု နည်းပြဆိုးလ်ရှား ပြောဆို
လူမစုံတဲ့ မန်စီးတီးကို ICC ပွဲဦးထွက်မှာ ဒေါ့မွန်အနိုင်ယူ
အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်ချက်အတွက် ဒလိုင်းလားမား ပြန်လည်တောင်းပန်